Homeरोचक / विचित्रभाग्यमानीले मात्र देख्ने यो दुर्लभ जीउँदो दाहिने शंखलाई दर्शन स्वरूप एक शेयर गर्नुहोस तपाईको जीवनमा शान्ति र खुसि मिल्नेछ !
January 13, 2020 Spnews रोचक / विचित्र Comments Off on भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो दुर्लभ जीउँदो दाहिने शंखलाई दर्शन स्वरूप एक शेयर गर्नुहोस तपाईको जीवनमा शान्ति र खुसि मिल्नेछ !
भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो दुर्लभ शंखको दर्शन गरि यसको महिमा पढी शेयर गर्नुहोस
बौद्धमा गो’ली चल्यो ! गु’ण्डा नाइके बिष्णु लामा प’क्राउ
आज घट्यो सुनको मूल्य ! हेर्नुस् कति पुग्यो तोलाको ?
October 5, 2018 Spnews रोचक / विचित्र Comments Off on भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो दुर्लभ शंखको दर्शन गरि यसको महिमा पढी शेयर गर्नुहोस
काठमाडौं । तपाई भाग्यमा कत्तिको विश्वास गर्नुहुन्छ ? गर्नुहुन्छ भने भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो दुर्लभ दाहिने शंखलाई दर्शन गरि यसको महत्व जानी शेयर गर्नुहोला जिवनमा धन, सम्पती र खुसी पाउँनुहुनेछ । तपाईलाई सुनेर अचम्म लाग्न […]
भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो दुर्लभ दाहिने शंखलाई दर्शन सोरुप ॐ लेखि शेयर गर्नुहोस तपाइको जीवनमा सुख शान्ति र खुसि मिल्नेछ !
September 6, 2017 Spnews रोचक / विचित्र Comments Off on भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो दुर्लभ दाहिने शंखलाई दर्शन सोरुप ॐ लेखि शेयर गर्नुहोस तपाइको जीवनमा सुख शान्ति र खुसि मिल्नेछ !